Cayaaryahanka Afrika ee BBC ee 2012 - BBC Somali - Cayaaraha
Cayaaryahanka Afrika ee BBC ee 2012
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 22 Novermber, 2012, 05:50 GMT 08:50 SGA
Shanta u tartamaysa Cayaaryahanka Afrika ee BBC ee sanadka 2012 ayaa u codeyntoodii hadda la xiray.
Yaya Toure ayaa sanadkii labaad soo galay ee isku xiga, waxaa kula jira cayaartooyga ay reer Ivory Coast team-mate Didier Drogba, Demba Ba oo u dhashay Senegal, Younes Belhanda oo reer Morocco ah iyo cayaaryahanka reer Zambia ee Christopher Katongo.
Qofka ku guuleysanaya waxaa go'aansanaya taageerayaasha Afrika, oo heystay ilaa 1830 GMT Khamiista, 13 December inay u codeeyaan.
Cayaaryahanka ku guuleysta waxaa lagu dhawaaqayaa Isniin, 17 December.
Christopher Katongo waxa uu u dhashay Zambia
Tobankii sano ee ugu dambeeyay waxa uu ahaa ninka kor u waday kabtanka kooxda Zambia ee ku guuleystay koobka Qaramada Afrika, Christopher Katongo.
Katongo waxa uu magaciisu ku soo baxay naadiga reer Zambia ee Green Buffaloes intii u dhaxeysay 2003 ilaa 2004.
Waxyaabaha lagu yaqaan waxaa ka mid ah iyadoo afar gool uu u dhaliyay hal cayaar koobabkii xiriirada ee 2003 iyo 2004 oo 5-0 iyo 6-1 ay uga kala guuleysteen Kooxda Saint Michel ee Seychelles iyo DR Congo kooxda ka tirsan ee DC Motema Pembe.
Sida saaxiibadiisa kale ee Zambia oo ka soo baxay cayaartooyda 17 iyo 20 jirka ah, ma ahayn ee Katongo waxa uu yimid mar danbe, waxaana uu ka bilaabay Chipolopolo cayaartooyda heerka 23.
Katongo waxa uu qeyb ka ahaa kooxdii cayaarihii dhamaan Afrika ee 2003 oo ay qeybta Afraad galeen magaalada Abuja, isaga oo hal gool keliya dhaliyay intii cayaaruhu socdeen.
Cayaartii ugu horreysay ee Yurub waxa uu ka bilaabay kooxda Brondby ee dalka Denmark sanadkii 2007, markii dambena waxa uu u wareegay dhinaca Germany kooxda Arminia Bielfeld 2008.
2010 waa uu ka tagay Germany waxaana uu hal sano la qaatay kooxda Skoda Xanthi ee dalka Giriig, markii dambena Shiinaha ayuu u wareegay 2011 oo uu u saxiixay naadiga uu hadda la joogo ee Henan Construction.
Demba Ba waxa uu u dhashay Senegal
Demba Ba waxa uu muujiyay dadaal dheeraad inuu mar kale ka soo baxo Newcastle kadib markii waqti adag uu la soo gudboonaaday.
Waxaa suurtagal ah inay tayadaasi tahay waxa keenay in ishu qabato oo uu soo galo liiskan tartanka sanadkan.
27 jirka u dhashay dalka Senegal waxa uu ka sameeyay Newcastle isbeddel weyn markii uu kaga soo biiray kooxda West Ham bishii June 2011.
Waxa uu dhaliyay 16 gool xilli cayaareedkiisi ugu horreeyay taasi oo keentay in uu noqdo ninka ugu gool dhaliska badan kooxda.
Ba waxa uu ku dhashay dalka Faransiiska, waxaana uu ku soo shaac baxay kooxda Teranga Lions oo la cayaareysay Tanzania bishii June 2007 waxaana uu dhaliyay afar jeer 16 jeer oo uu saftay.
Ba iyo saaxiibadiisa kooxda Senegal a safan doonaan cayaaraha Koobka Qaramada ee sanadka soo socda ka dhici doona Koonfur Afrika kadib markii Senegal laga saaray sababtoo ah buuq dhacay wareeggii ugu dambeeyay ee ay ku soo baxayeen oo ay la lahaayeen Ivory Coast.
Didier Drogba waxa uu u dhashay Ivory Coast
Bishii May ee sanadkan, Didier Drogba waxa uu ka tagay Chelsea kadib markii sideed xilli uu u cayaarayay - waxa uu ahaa ninkii cayaarta kama dambeystii cayaarta Horyaalka Yurub.
Drogba, oo laga saaray cayaartii kama dambeysta afar sano ka hor, ayaa qaaday rigoorihii guusha markaasi oo Naadi Ingiriis ah loo caleemo saaray horyaalka qaaradda markii ugu horreysay taariikhdooda.
34 jirka oo uga tagay calaamad aan tirmeyn kubadda cagta ee Ingiriiska ayaa waxa uu ku biiray naadi ka tirsan Shiinaha, Shanghai Shenhua.
Cayaartooyga reer Ivory Coast ayaa lagu soo warramay in uu toddobaadkii qaadanayo lacag dhan 200 oo kun oo giniga Istarliinka ah.
Intii uu la jooga Chelsea waxa uu Drogba dhaliyay in ka badan 150 gool in ka badan 350 cayaarood. Waxa uu ku guuleystay saddex jeer Premier League, koobka FA afar jeer iyo laba jeer League Cup.
Oktoobar taageerayaasha Chelsea ayaa u codeeyay inuu yahay cayaartooygii ugu wanaagsanaa ee soo mara Naadiga.
Horey ayuu ugu guuleeystay Cayaaryahanka Afrika ee BBC ee sanadkii 2009.
Yaya Toure waxa uu u dhashay Ivory Coast
Yaya waxaa uu ka caawiyey kooxda Manchester City inay 2011ka ku guuleysato koobkeedii ugu horeeyey 35 sanno kadib, markii uu dhaliyey goolka qura ee guusha ee koobka FA, cayaar ka dhacdey garoonka Wembley.
Yaya Toure waa cayaaryahan u dhashey Ivory Coast oo khadka dhece ka cayaara, door weyna wuxuu ka cayaarey in Manchester City ay hanato horyaalka dalka 44 sanno kadib.
Waa 29 jir, waxaana uu kooxihii uu u cayaarey la qeybsadey guulo kala duwan, sida tartanka horyaalada Yurub, Koobka European Super, koobka Fifa Club World, laba horyaal oo uu la qaadey kooxda Barcelona ee Spain, iyo horyaalka Giriigga oo uu la qaadey kooxda Olympiakos.
Toure, oo ku guuleystey cayaaryahanka ugu fiican Africa sannadkii 2011, waxaa uu xilli cayaareedkani ku bilaabey hab farasmo oo aad u xooggan.
Waxa uu dhaliyay goolkii City Community Shiel ay kaga badisay Chelesa, waxaana uu dhaliyay afar gool oo kale intii uu socday tartanka Premier League.
Waxaa bisha January uu qeyb ka noqon doonaa xulka Ivory Coast ee doonaya inay ku guuleystaan koobka Qaramada Afrika.
Younes Belhanda waxa uu u dhashay Morocco
Marka ciyaartoyga caanka ah ee Zinadine Zidane uu ammaanayo kartidaada ciyaareed, waad ogaanaysaa inaad si wanaagsan u ciyaareysid, waxaana wiilka dhallinta yar ee Younes Belhanda uu soo qaatay sanad la xasuusan doono.
Wiilkaas 22 jirka ah waxaa uu ka mid ahaa ciyaartoydii ugu muhiimsanayd ee guusha koobka u soo hoyday kooxda heerka koowaad ee Faransiiska ee Montpelliers xilli-ciyaareedkii la soo dhaafay, taasoo ahayd guushii ugu horreysay ee kooxdaasi gaarto 100-kii sano ee ay soo jirtay.
Isagoo ka barbar ciyaarayay gooldhaliyaha Oliver Giroud, wiilkaas reer Morocco waxaa uu dhaliyay 12 gool muddo 26 ciyaarood ah, kuwaas oo lix ka mid ah uu dhaliyay intii uu socday tartankii ay koobka ku qaadday kooxdiisu kaddib markii uu ka soo laabtay tartankii koobka Qaramada Afrika ee bishii Jannaayo.
Wiilkan oo Eebbe ku mannaystay farsamo ciyaar-wanaag, aragti heer sare ah iyo darbad wanaag, Belhanda waxaa uu ka mid ahaa ciyaartoyda ka dhex muuqda kooxda Morocco intii uu socday tartankii koobka Qaramada ee sanadka 2012, isagoo goolka guusha ka dhaliyay kooxda Niger, isla markaana sallaxay gool looga badiyay kooxda Gabon.
Hase ahaatee waxay ahayd doorkii xiddignimo ee uu ka soo qaatay koobka ay markii ugu horreysay qaadday kooxda Montpelliers tan dibadda u soo saartay isagoo ku mutaystay abaalmarinta ciyaartoyga kooxda sanadka iyo sidoo kale laacibka dhallinta yar ee sanadka.
Abaalmarinta dambe waxaa hore ugu guulaystay ciyaartoyda ay ka mid yihiin: Eden Hazard, Frank Ribery, Thierry Henry iyo Zidane laf ahaantiisa, sidaas darteed Belhanda saf wanaagsan ayuu galay.
Waxaa uu dhaliyay afar gool toban kulan ee ciyaaraha heerka koowaad, iyo labo gool oo uu dhaliyay afar ciyaarood oo ka tirsan tartanka horyaalka Yurub isagoo markii ugu horreysay ka dheelaya tartanka kubbadda cagta ee ugu sarreeya qaaradda Yurub.
Waxa ay u ahayd sanad wanaagsan dhamaan cayaartooyga la magacaabay, oo afar ka mid ah ay abaalmarino ay ku guuleeysteen.
Drogba si ka wanaagsan ugama tageen Chelsea dhamaadkii xilli cayaareedka, kadib markii uu ku guuleeystay rigoorihii guusha ee koobkii Champions League markii ugu horreysay taariikhda naadiga, isagoo dhaliyayna gool noqday kii guusha ee ayaartii kama dambeysta koobka FA.
Toure waxa uu ahaa cayaartooy muhiim u ah Manchester City iyadoo loo caleemo saaray horyaalka Premier League arkii ugu horreysay - markii ugu horreysay ee ay halkaasi gaaraan muddo 44 sano ah.
Darajo gudaha ah ayaa waxa helay Belhanda, kaasi oo 12-kiisa gool iyo cayaartiisa ay u ahayd arrin weyn Montpellier oo wax aan la fileyn ku noqotay inay ku guuleystaan horyaalka French Ligue 1.
Masraxa caalamka waxaa markale banaanka yimid Katongo oo safka hore ka hoggaaminayay Zambia, oo guusha la yaabka lahayd ee Koobka Qaramada Afrika, halkaasi oo Chipolopolo ay rigoorayaal ku garaacday Ivory Coast cayaartii kama dambeysta.
Ba wax fiican kama qaban Nations Cup, iyadoo Senegal ay ka hartay tartanka heerkii kooxaha, laakiin shaqsiyan waxa uu guul ka gaaray naadigiisa Newcastle halkaasi oo uu xilli cayaareedka ugu dambeeyay uu ku dhameystay gool dhaliyaha ugu sareeya 17 gool, taasi oo ka dhigtay inuu kaalinta shanaad ka galo.
Liiska cayaaryahannada horey ugu guuleystay abaalmarinta BBC.